စာနာမှုအကူအညီအတွက် NUG နဲ့ ဆက်ဆံဖို့ မလေးရှားအဆိ်ုပြုချက် အာဆီယံလက်ခံမလား
၀၅ မေ၊ ၂၀၂၂
မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အာဆီယံအနေနဲ့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်ဖို့ အဆိုပြုဖို့ရှိတာကို စစ်ကောင်စီဘက်က ကြိုကန့်ကွက်ပေမဲ့ အာဆီယံမှာ ညိူနှိုင်းဆုံးဖြတ်သွားနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများရဲ့ အင်တာနက် Online အစည်းအဝေးမှာ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Saifuddin Abdullah အနေနဲ့ အခုလို အဆိုပြုဖို့ မလေးရှားသတင်းတွေမှာ စနေက ပြောထားတာကို မြန်မာစစ်ကောင်စီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တနင်္ဂလာနေ့မှာ ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။
NUG ဟာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့မို့ မလေးရှားအဆိုပြုမူဟာ မဆင်မခြင် တာဝန်မဲ့မူပါလို့ စစ်ကောင်စီဘက်က ပြောလာချိန်မှာ၊ NUG ဘက်ကလည်း စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မူကြောင့် လူသားချင်းစာနာမူဒုက္ခအတွက် ASEAN နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတာပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ NUG နဲ့ အထူးသဖြင့် လူသားချင်း စာနမှုဆိုင်ရာ အခြေခံ တရားမဝင် သဘောမျိုး ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ မလေးရှား က အဆိုပြုတာကို " မြန်မာ မဟာဗျူဟာ နဲ့ မူဝါဒ လေ့လာရေး အင်စတီကျူ့ ISP မြန်မာအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်သူငြိမ်း က
ဦးအောင်သူငြိမ်း ။. ။ အာဆီယံက ဘယ်တော့မှ တနိုင်ငံထဲ ကြွံလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ အာဆီယံမှာ Consensus အားလုံးကြေလည် သဘောတူမှ လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ နောက်တခါ အာဆီယံရဲ့ အခြေခံကြတဲ့မူက သူတပါးနိုင်ငံ ဝင်မစွက်ဖက်ရေး အနေအထားရှိတာပေါ့နော်။ ရှိတဲ့အခါကြတော့ တဖက်က ဒီမိုကရေစီ အရေးကို ဝိုင်းကူချင်တာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကိစ္စတွေက အာဆီယံ က အားလုံးနဲ့အတူတူ ရှောက်မှရမယ် သဘောမျိုးလို့ မြင်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကမ္ဘောဒီးယားက ဦးဆောင်မှုယူထားတယ်။ အထူးသံတမန်အနေနဲ့ ယူထားတယ်ဆိုတော့ သူရဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ပဲ လုပ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘောဒီးယားဦးဆောင် သဘောထား တခုတည်းမဟုတ်ပဲ အာဆီယံမှာ ညှိနှိုင်းရဖို့ ဖြစ်လာနိုင်တာကို NUG ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးမိုးဇော်ဦး က အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
ဦးမိုဇော်ဦး ။. ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့က အာဆီယံနိုင်ငံတချို့နဲ့ အဆက်သွယ်ရှိတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတယ်။ အဲဒီတော့ တချို့နိုင်ငံတွေဆိုလိုရှိရင် အခုလို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာ အခု မလေးရှားဆိုလို့ရှိရင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်ပေါ့လေ။ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ တခြား သက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေက တဆင့်ပေးပို့ထားတာရှိပါတယ်။ အခု ပြုလုပ်မယ့် အစည်းအဝေးမှာလည်း လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ သဘောထားတွေကို ပေးပို့ထားတာရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အာဆီယံအနေနဲ့က သက်ဆိုင်ရာ State Holder တွေပေါ့နော် အားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ သဘောရပါတယ်။ ဒါဟာ အာဆီယံကနေ ချမှတ်ထားတဲ့5Point Consensus ဘုံသဘောတူညီချက်နဲ့လည်း အညီဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့က အာဆီယံမှာ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်တယ်ပေါ့နော်။ အာဆီယံရဲ့ Special Envoy အနေနဲ့ပေါ့နော် ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ထိတွေ့ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အားလုံးဝိုင်းဝန်း ညှိနှိုင်းပြီးရင် အများရဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက်နဲ့ပဲ ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ နားလည်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အာဆီယံ အခက်ကြုံနေရပုံကိုလည်း ဦးအောင်သူငြိမ်း က
ကိုအောင်သူငြိမ်း ။. ။ တဖက်ကကြတော့ ဒီ အာဆီယံက ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေ သဘောတူထားတဲ့ ၅ ချက်က အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးသလောက်ရှိတယ်။ နောက်တခါကြပြန်တော့လည်း လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီဆိုတာမှာလည်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး လှူတာလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။ တချို့လုပ်ငန်းတွေကြတော့လည်း တဖက်က မြန်မာကြက်ချေနီ၊ တဖက်ကလည်း အာဆီယံ AHC လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးတဲ့ အေဂျင်စီပေါ့။ ဒါတွေနဲ့ပဲ ပြီးသွားတယ်ပေါ့။ ဒီထက်ပို အရေးကြီးတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်တို့၊ ဒီထက်ပို ကျယ်ပြန့်တဲ့ လူတွေ အကူအညီမရောက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်။ အဲဒီကိစ္စတွေက ဆက်ဆွေးနွေးဖို့၊ ဆက်အကူအညီပေးဖို့ဆိုရင် တော်တော်လည်း ခက်အုန်းမယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ရမယ့် ကိစ္စတွေလို့မြင်ပါတယ်။
ဦးမိုးဇော်ဦး ။. ။ ဒီအပေါ် ဦးမိုးဇော်ဦး ကလည်း
ဦးမိုးဇော်ဦး ။. ။ ကျနော်တို့ကြားတယ် အစည်းအဝေးလုပ်မယ့်ကိစ္စ။ စစ်ကောင်စီက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ကြေညာထားပြီးဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပြည်တွင်းမှာ အခုလောလောဆယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ကရင်နီပြည်နယ်လိုနေရာတွေမျိုးမှာ မီးတွေရှို့တယ်၊ လူတွေကို သတ်ဖြတ်နိုပ်စက်နေတယ်၊ အင်တာနက်တွေဘာတွေဖြစ် စသဖြင့်ပေါ့လေ။ တမင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖြတ်လေးဖြတ်မှုအတိုင်း အကြမ်းဖက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ ဘယ်သူကိုမှ အာဆီယံပဲဖြစ်ဖြစ် ကုလသမဂ္ဂပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူကိုမှ ဒီနေရာတွေကို အကူအညီတွေ ရောက်ရှိဖို့ကို လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်ကို ကျနော်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ၊ ကျနော်တို့နဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့ တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ ၊ မြေပြင်မှာရှိကြတဲ့ တကယ်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေ ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေဆီကို ရောက်ရှိဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်ပါ။ နယ်စပ်ကိုလည်း ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ အကူအညီပေးဖိ်ု့ကိစ္စတွေကိုလည်း စဉ်းစားပါဆိုပြီး ဆက်တိုက် တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ဒီလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကူညီရေးကိစ္စမှာ နိုင်ငံတကာ NGO တွေအပါအဝင် ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်တဲ့နေရာပို့ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ပေါင်းမလုပ်လိုပဲ တကိုယ်တော် သူလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေနဲ့ပဲ လုပ်ချင်ပုံပေါက်နေပါတယ်။
မလေးရှားနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးက အာဆီယံအနနေဲ့ NUG အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရနဲ့ ဆကျဆံလုပျကိုငျဖို့ အဆိုပွုဖို့ရှိတာကို စဈကောငျစီဘကျက ကွိုကနျ့ကှကျပမေဲ့ အာဆီယံမှာ ညိူနှိုငျးဆုံးဖွတျသှားနိုငျတယျလို့ သုံးသပျသူတှကေ ဆိုပါတယျ။
ဒီနေ့ အာဆီယံ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးမြားရဲ့ အငျတာနကျ Online အစညျးအဝေးမှာ မလေးရှားနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Saifuddin Abdullah အနနေဲ့ အခုလို အဆိုပွုဖို့ မလေးရှားသတငျးတှမှော စနကေ ပွောထားတာကို မွနျမာစဈကောငျစီ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနက တနင်ျဂလာနမှေ့ာ ကနျ့ကှကျထားပါတယျ။
NUG ဟာ အကွမျးဖကျအဖှဲ့မို့ မလေးရှားအဆိုပွုမူဟာ မဆငျမခွငျ တာဝနျမဲ့မူပါလို့ စဈကောငျစီဘကျက ပွောလာခြိနျမှာ၊ NUG ဘကျကလညျး စဈကောငျစီအကွမျးဖကျမူကွောငျ့ လူသားခငျြးစာနာမူဒုက်ခအတှကျ ASEAN နဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလိုတာပါလို့ ဆိုပါတယျ။ ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ NUG နဲ့ အထူးသဖွငျ့ လူသားခငျြး စာနမှုဆိုငျရာ အခွခေံ တရားမဝငျ သဘောမြိုး ထိတှဆေ့ကျဆံဖို့ မလေးရှား က အဆိုပွုတာကို " မွနျမာ မဟာဗြူဟာ နဲ့ မူဝါဒ လလေ့ာရေး အငျစတီကြူ့ ISP မွနျမာအဖှဲ့ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးအောငျသူငွိမျး က
ဦးအောငျသူငွိမျး ။. ။ အာဆီယံက ဘယျတော့မှ တနိုငျငံထဲ ကွှံလုပျတာမြိုးမဟုတျပဲနဲ့ အာဆီယံမှာ Consensus အားလုံးကွလေညျ သဘောတူမှ လုပျတယျဆိုတာမြိုးလညျး ရှိပါတယျ။ နောကျတခါ အာဆီယံရဲ့ အခွခေံကွတဲ့မူက သူတပါးနိုငျငံ ဝငျမစှကျဖကျရေး အနအေထားရှိတာပေါ့နျော။ ရှိတဲ့အခါကွတော့ တဖကျက ဒီမိုကရစေီ အရေးကို ဝိုငျးကူခငျြတာလညျး ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့ကိစ်စတှကေ အာဆီယံ က အားလုံးနဲ့အတူတူ ရှောကျမှရမယျ သဘောမြိုးလို့ မွငျပါတယျ။ လကျရှိ ကမ်ဘောဒီးယားက ဦးဆောငျမှုယူထားတယျ။ အထူးသံတမနျအနနေဲ့ ယူထားတယျဆိုတော့ သူရဲ့ လမျးကွောငျးပျေါပဲ လုပျရမယျထငျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါပမေယျ့ ကမ်ဘောဒီးယားဦးဆောငျ သဘောထား တခုတညျးမဟုတျပဲ အာဆီယံမှာ ညှိနှိုငျးရဖို့ ဖွဈလာနိုငျတာကို NUG ဒုနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဦးမိုးဇျောဦး က အခုလိုရှငျးပွပါတယျ။
ဦးမိုဇျောဦး ။. ။ ကနြျောတို့အနနေဲ့က အာဆီယံနိုငျငံတခြို့နဲ့ အဆကျသှယျရှိတယျ။ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုရှိတယျ။ အဲဒီတော့ တခြို့နိုငျငံတှဆေိုလိုရှိရငျ အခုလို ထုတျဖျောပွောဆိုတာ အခု မလေးရှားဆိုလို့ရှိရငျ ထုတျဖျောပွောဆိုတာတှရှေိတယျပေါ့လေ။ အာဆီယံနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးမြား အစညျးအဝေးဖွဈဖွဈပေါ့။ တခွား သကျဆိုငျရာ မိတျဆှနေိုငျငံတှကေ တဆငျ့ပေးပို့ထားတာရှိပါတယျ။ အခု ပွုလုပျမယျ့အစညျးအဝေးမှာလညျး လူသားခငျြး စာနာမှုဆိုငျရာနဲ့ပတျသကျပွီး ကနြျောတို့ သဘောထားတှကေို ပေးပို့ထားတာရှိပါတယျ။ အဲဒီတော့ အာဆီယံအနနေဲ့က သကျဆိုငျရာ State Holder တှပေေါ့နျော အားလုံးနဲ့ထိတှဆေ့ကျဆံဖို့ လိုအပျတယျလို့ ကနြျောတို့ သဘောရပါတယျ။ ဒါဟာ အာဆီယံကနေ ခမြှတျထားတဲ့5Point Consensus ဘုံသဘောတူညီခကျြနဲ့လညျး အညီဖွဈပါတယျ။ မလေးရှားနိုငျငံအနနေဲ့က အာဆီယံမှာ ဘယျလိုဆောငျရှကျသငျ့တယျပေါ့နျော။ အာဆီယံရဲ့ Special Envoy အနနေဲ့ပေါ့နျော ဘယျလို ပုဂ်ဂိုလျတှကေို ထိတှခှေ့ငျ့ရှိပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ အားလုံးဝိုငျးဝနျး ညှိနှိုငျးပွီးရငျ အမြားရဲ့ ဘုံသဘောတူညီခကျြနဲ့ပဲ ဆောငျရှကျရမယျလို့ နားလညျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အာဆီယံ အခကျကွုံနရေပုံကိုလညျး ဦးအောငျသူငွိမျး က
ကိုအောငျသူငွိမျး ။. ။ တဖကျကကွတော့ ဒီ အာဆီယံက ထိပျသီးခေါငျးဆောငျတှေ သဘောတူထားတဲ့ ၅ ခကျြက အကောငျအထညျမဖျောနိုငျသေးသလောကျရှိတယျ။ နောကျတခါကွပွနျတော့လညျး လူသားခငျြး စာနာမှု အကူအညီဆိုတာမှာလညျး ကိုဗဈကာကှယျဆေး လှူတာလောကျနဲ့ပဲပွီးသှားတယျ။ တခြို့လုပျငနျးတှကွေတော့လညျး တဖကျက မွနျမာကွကျခနြေီ၊ တဖကျကလညျး အာဆီယံ AHC လူသားခငျြးစာနာမှု အကူအညီပေးတဲ့ အဂေငျြစီပေါ့။ ဒါတှနေဲ့ပဲ ပွီးသှားတယျပေါ့။ ဒီထကျပို အရေးကွီးတဲ့ စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျတို့၊ ဒီထကျပို ကယျြပွနျ့တဲ့ လူတှေ အကူအညီမရောကျနိုငျတဲ့ကိစ်စမြိုးပေါ့နျော။ အဲဒီကိစ်စတှကေ ဆကျဆှေးနှေးဖို့၊ ဆကျအကူအညီပေးဖို့ဆိုရငျ တျောတျောလညျး ခကျအုနျးမယျ။ ပွငျးပွငျးထနျထနျ လုပျရမယျ့ ကိစ်စတှလေို့မွငျပါတယျ။
ဦးမိုးဇျောဦး ။. ။ ဒီအပျေါ ဦးမိုးဇျောဦး ကလညျး
ဦးမိုးဇျောဦး ။. ။ ကနြျောတို့ကွားတယျ အစညျးအဝေးလုပျမယျ့ကိစ်စ။ စဈကောငျစီက အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးအဖွဈ ကွညောထားပွီးဖွဈတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ပွညျတှငျးမှာ အခုလောလောဆယျ ခငျြးပွညျနယျ၊ ကရငျနီပွညျနယျလိုနရောတှမြေိုးမှာ မီးတှရှေို့တယျ၊ လူတှကေို သတျဖွတျနိုပျစကျနတေယျ၊ အငျတာနကျတှဘောတှဖွေဈ စသဖွငျ့ပေါ့လေ။ တမငျရညျရှယျခကျြနဲ့ ဖွတျလေးဖွတျမှုအတိုငျး အကွမျးဖကျပွီး ဆောငျရှကျနခြေိနျမှာ ဘယျသူကိုမှ အာဆီယံပဲဖွဈဖွဈ ကုလသမဂ်ဂပဲဖွဈဖွဈ ဘယျသူကိုမှ ဒီနရောတှကေို အကူအညီတှေ ရောကျရှိဖို့ကို လကျခံမှာမဟုတျပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ကို ကနြျောတို့နဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ ၊ ကနြျောတို့နဲ့ ဆကျစပျပတျသကျတဲ့ တိုငျးရငျးသား တျောလှနျရေးအဖှဲ့တှေ ၊ မွပွေငျမှာရှိကွတဲ့ တကယျဒသေခံအဖှဲ့အစညျးတှေ ဒီလိုအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပွီးတဲ့အခါမှာ အမှနျတကယျလိုအပျနတေဲ့ ဒုက်ခရောကျနသေူတှဆေီကို ရောကျရှိဖို့အတှကျ ဆောငျရှကျပါ။ နယျစပျကိုလညျး ဖွတျကြျောပွီးတော့ အကူအညီပေးဖို့ကိစ်စတှကေိုလညျး စဉျးစားပါဆိုပွီး ဆကျတိုကျ တိုကျတှနျးနတောဖွဈပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ စဈကောငျစီအနနေဲ့ ဒီလူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ ကူညီရေးကိစ်စမှာ နိုငျငံတကာ NGO တှအေပါအဝငျ ဒသေတှငျးဆိုငျရာ လိုအပျတဲ့နရောပို့ပေးနိုငျတဲ့အဖှဲ့တှနေဲ့ ပေါငျးမလုပျလိုပဲ တကိုယျတျော သူလကျအောကျခံအဖှဲ့တှနေဲ့ပဲ လုပျခငျြပုံပေါကျနပေါတယျ။
စစ်သူနာပြု အမျိုးသမီး ဗိုလ်ကြီးတဦးရဲ့ အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရေး အတွေ့အကြုံ
ထိုင်းအထူးသံ မြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အလားအးလာ
NUG ယာယီသမ္မတရဲ့ နိုင်ငံတော်အခြေပြ မိန့်ခွန်းအပေါ် အမြင်တချို့
တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအပေါ် အကဲခတ်အမြင်